<<first <prev 12(3)4567 8910 next> last>>
Posted By - Ko Ko - June 1, 2012
Super Junior ရဲ့ Album အသစ်ကို အဖွဲ့
ခေါင်းဆောင် Leeteuk စစ်မှု မထမ်း မှီဖြန့် မည်
Super Junior Group Leader Leeteuk
Contributed by zonze
Super Junior အဖွဲ့ဟာ သူတို့ ရဲ့ ဆဌမမြောက် Studio Album ကို ဒီနှစ်ကစပြီး နှစ်နှစ်ကြာ စစ်မှုထမ်းသွားမယ့် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် Leeteuk ရဲ စစ်မှုထမ်း တာဝန်မ စတင်ခင် မှာဖြန့် မယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
Super Junior ဟာ မေလ ၂၆၊ ၂၇ ရက်နေ့ မှာ သူတို့ရဲ. World Tour ရဲ့တစ်စိတ် တစ်ပိုင်း အနေနဲ့ Super Show4Concert ကို တောင် ကိုရီးယား နိုင်ငံ၊ ဆိုးလ်မြို့၊ အိုလံပစ် အားကစားကွင်း မှာ ဖျော်ဖြေ နေစဉ် ဒုတိယ မြောက်နေ့ မှာ ကြေညာ ခဲ့တာပါ။
အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် Leeteuk က အဖွဲ့ ဟာ သူစစ်မှု မထမ်းမီ Album အသစ်ထွက် နိုင်အောင် ကြိုးစား နေတယ်လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
Super Junior Group
ပရိတ်သတ် တွေက သူတို့ရဲ့ Album အသစ်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ လက စစ်မှုထမ်း ပြီး ပြန်လာ တဲ့ အဖွဲ့ဝင် Kangin ရဲ့ ပြန်အလာနဲ့ အတူ ဒီနွေရာသီမှာ ထွက်မယ်လို့ ထင်ကြေး ပေးခဲ့ကြ ပါတယ်။
Super Junior ရဲ့ မနှစ်က ထွက်ခဲ့တဲ့ 'Mr.Simple' Album ဟာ ဒီနှစ် မတ်လ အထိ တောင် ကိုရီးယား နိုင်ငံမှာ ကော်ပီ ၅၀၂,၈၃၀ ချပ်ရောင်း ရခဲ့ ရပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ Album သုံးခု စလုံးဟာ တောင် ကိုရီးယား နိုင်ငံမှာ သုံးနှစ် စလုံး အရောင်း ရဆုံး Album ဖြစ်ခဲ့ကာ သူတို့ ဟာ Album King ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Super Junior အဖွဲ့ရဲ့ Album အသစ်ကို ဒီနှစ် နိုဝင်ဘာလ မှာဖြန့် မယ်လို့ သိရပါတယ်။
Tags: korean singer | korean news
Summary - Super Junior-s Leeteuk revealed that Super Junior-s sixth studio album will be released before he goes away to serve his two-year mandatory military service. On May 27th, during Super Junior [Super Show 4] in Seoul Olympic Park Stadium, Leeteuk went on stage and surprisingly revealed, [Our sixth album will be released before I go to serve my military service]. SM Entertainment confirmed throughaphone conversation with Osen, [It is true that Super Junior is currently working on their sixth album]. Super Junior released their fifth album [Mr. Simple] in August 2011, which garnered much love both domestically and internationally, therefore many fans are highly anticipating Super Junior-s sixth album. Meanwhile, Super Junior held their [Super Show 4] encore stages in Seoul Olympic Park Stadium on May 26th and May 27th. Super Junior who has toured 10 cities and performed 24 times for [Super Show 4] toatotal of 400,000 audience members.
3 comments submit comments
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/524/super-junior-to-release-their-6th-studio-album-before-leeteuk-joins-the-military
Goo Ha-ra Shamed By Japanese Magazine
Posted By - Ko Ko - May 31, 2012
မကြာခင် က ဂျပန် သွားတဲ့ KARA အဆို အဖွဲ့ဝင် Goo Ha-ra ကို အနီးကပ် ပိုက်စိပ်တိုက် ပြီး ဓါတ်ပုံ ရိုက်ကြ ပါတယ်။
ယောက်ကျား ကြီးများ အတွက် ထုတ်တဲ့ မဂ္ဂဇင်း တစ်စောင် (adult's entertainment magazine) မှာ Goo Ha-ra ရဲ့ အတွင်း ကျကျ ပုံပါလာ ပြီး မေလ ၁၄ ရက်နေ့ ကစတင် ပြီး online မှာပျံ့ သွားခဲ့ ပါတယ်။
ပုံနဲ့ အတူ ကိုးရီးယား ကို နှိမ်ပြီး ရေးထားတဲ့ စာသား တွေလည်း ပါလာ လေတော့၊ လူမျိုးရေး နဲ့ နွှယ်တဲ့ အငြင်ပွားမှု တွေပါ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ ပါတယ်။
KARA အဖွဲ့ရဲ့ agency DSP Media က အဆိုပါ မဂ္ဂဇင်း ကို တရား စွဲဖို့ ပြင်ဆင် နေပါတယ်။
Tags: korean singer | korean news |
Summary - Kara member Goo Ha-ra has becomeatarget of some close-up scrutiny in Japan. A picture of an article published in an adult-s entertainment magazine surfaced online on May 14, in which Goo-s short skirt when sitting down has been zoomed-in on. The article entitled [Sexy Shots of Hallyu Stars - The side of an idol group that you will never see inaJapanese idol] also included similar shots of members from Girls Generation and Rainbow to make its point. DSP Media has also announced that it will take legal actions against the publication for soiling Goo-s image. Meanwhile, Korean netizens are furious over the article and at the publication and have defended Goo by saying, [That-s so low to criticize the celebrities of your neighboring country], while some have expressed shame but added, [That-s the price you have to pay when you are active in Japan].
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/523/goo-ha-ra-shamed-by-japanese-magazine
Posted By - Ko Ko - May 19, 2012
Super Junior ရုံပြည့်တဲ့ပွဲ
Super Junior အဆို အဖွဲ့ဟာ ဂျပန် Tokyo Dome မေ ၁၂ နဲ့ ၁၃ ရက်နေ့ မှာ ရုံပြည့် ရုံလျှံ အသုံးတော် ခံခဲ့ကြ ပါတယ်။
Super Show4လို့အမည် ပေးထားတဲ့ show ပွဲ မှာ ပရိသတ် ၁၁၀, ၀၀၀ ကျော် လာရောက် အားပေး ခဲ့ကြ ပါတယ်။
Online ကနေ လက်မှတ် စရောင်း တဲ့အခါ မှာ လူ ၄သိန်း လောက် ( ၄ ဆ) လက်မှတ် လုဝယ် ကြတာ တွေ့ရ လို့ show ပွဲကို ၁၃ ရက်နေ့ မှာ တစ်ရက် တိုးပြီး ပြုလုပ် ခဲ့ရ ပါတယ်။
Super Junior အဆို အဖွဲ့ဟာ ဂျပန် မှာ သီဆို ခဲ့တာ ၂ကြိမ် ရှိသွား ပါပြီး၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ က Osaka မြို့ Kyocera Dome မှာ ပထမ အကြိမ် သီဆို ခဲ့ကြ စဉ်ကလည်း ရုံလျှံ ခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး Super Junior အဖွဲ့ဟာ ကိုးရီးယား နိုင်ငံ Seoul မြို့ Olympic Park မှာ May 26 နဲ့ 27 တို့မှာ show ပွဲများ ဆက်လက် တင်ဆက် ကြလယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Summary - Hallyu group Super Junior again proved its force by performing toapacked-out house at Tokyo Dome in Japan over two days on May 12 through to 13. [Super Show 4] brought more than 110,000 fans inside despite the fact that the band had never officially debuted there. This is the second time, since the band-s performance at Kyocera Dome in Osaka last December, that the band has performedasell-out tour in Japan. There was some fierce competition among Japanese fans to secure the tickets. More than 400,000 battled it out for the tickets as soon as they went on sale. Originally, the band was to perform just on the 12th, but to meet surging demands, they had to hold one more show. The next stop on the band-s tour is Seoul. The boy band will perform two shows from May 26 to 27 at Olympic Park in eastern Seoul.
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/522/super-junior-packs-out-tokyo-dome
Posted By - Ko Ko - May 11, 2012
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/521/korean-dramas-now-airing-10-05-2012
Daniel Henney And Jessica Snap A Photo Together
Posted By - Ko Ko - April 29, 2012
Daniel နဲ့ Jessica တို့အတွဲပုံ
Contributed by Tom26
ကိုရီးယား မင်းသား Daniel Henney နဲ့ Girls Generations အဖွဲ့ဝင် Jessica တို့ရဲ့ အတူရိုက် ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံ ကို Daniel ရဲ့ Twitter account ပေါ်မှာ တင်ထား တာကို တွေ့ ကြရ ပါတယ်။
သူတို့ ၂ဦးဟာ လှပတဲ့ ပွဲတတ် ၀တ်စုံ တွေကို ၀တ်ဆင် ထားပြီး Burberry Taiwan Flagship ဖွင့်ပွဲမှာ ရိုက်ကူး ထားတဲ့ပုံလို့ သိရှိရ ပါတယ်။
"သူတို့ ၂ဦးက ကြည့်လို့ အလွန် လိုက်ဖက် ပါတယ်"
"Jessica ကို အရမ်း မနာလို ဖြစ်မိ ပါတယ်"
" မင်းတို့ ၂ယောက်က တကယ် လိုက်ဖက် တဲ့အတွဲ ဘဲ"
မကြာသေး ခင်ကဘဲ Jessica မှ မင်းသား Denial နဲ့ ခင်မင် ချင်တယ်လို့ ဖွင့်ဟ သွားပါ သေးတယ်။ ခုတော့ သူမရဲ့ ဆန္ဒ္ဒတွေ ပြည့်ဝသွားပြီပေါ့။
Tags: korean actor | korean actress | korean news | korea
Summary - Model and actor Daniel Henney and Girl-s Generation member Jessica have recently come under much attention for their picture together. On April 27th, Daniel Henney tweeted, Great event last night. Had fun with Jessica - Daniel Henney April 27, 2012. The two stars look snazzy as they cozy up forapicture together. Their classy attire and good looks added to the rather regal and elegant mood of the photo, which is reported to have been taken at the Burberry Taiwan flagship store opening event. Fans who viewed the post commented, [The two of you haveacrazy aura] , [I am jealous of Jessica], and [You guys are radiant together]. Jessica, who previously expressed her desire to get in touch with Daniel Henney, seems to have had her wish granted.
6 comments submit comments
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/520/daniel-henney-and-jessica-snap-a-photo-together
Rendering time 0.0164 sec **
18a5e6adba7f3c895be2057a1d09a219 - January 22, 2018 - 2:06:19 am